फोटोशपमा पोइन्ट फोकस केहि फोटो बाहिर ल्याउन फोटोग्राफ | क्रिएटिव अनलाइन
Un फोटोशपमा पोइन्ट फोकस गर्नुहोस् फोटोमा केहि देखिनका लागि द्वारा एक व्यापक प्रयोग गरीन्छ फोटोग्राफर र डिजाइनरs जब तिनीहरू छविको कुनै अंश हाइलाइट गर्न र अर्को अंशको महत्त्व हटाउन चाहन्छन् जुन त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। धेरै अवसरहरूमा हामी राम्रा तस्बिरहरू फेला पार्न सक्दछौं तर त्यो गहिराईको अभाव वा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू तस्विरमा लिइएको बेला हराएको थियो।
पृष्ठभूमि ब्लर गर्नुहोस् छविको मुख्य भाग हाइलाइट गर्न, केही विवरणको लागि दृश्य महत्त्वलाई कम गर्न एक सूक्ष्म ब्लर सिर्जना गर्नुहोस् वा केवल प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ अधिक दृश्य खेल संग फोटोग्राफी। यो धेरै राम्रा नतीजाहरूको साथ एक प्राविधिक हो र यसको राम्रो ज्ञानको आवश्यक पर्दैन Photoshop।
हामीले बनाउनको लागि पहिलो चीज पोइन्ट फोकस प्रभावl एक तस्वीर हुनुपर्दछ जहाँ प्रभाव लागू गर्न सकिन्छ, एक पटक हामीसँग फोटो छ हामी यसलाई खोल्नेछौं Photoshop र हामी काम गर्न थाल्नेछौं।
हामी लेयर नक्कल गर्छौं मुख्य दुई पटकसम्म तपाईसँग कुल तीन तहहरू छन्।
हामी बीचमा लेयर चयन गर्छौं, यो यो लेयरमा छ जहाँ हामी ब्लर लागू गर्न लागेका छौं। यो सुझाव छ तहहरूको नाम राख्नुहोस् अधिक व्यवस्थित तरिकाले काम गर्न, यस अवस्थामा हामी केन्द्रलाई फिल्डको नाम "केन्द्रबिन्दु बाहिर" र माथिल्लो तह "फोकसमा" भनेर राख्न सक्छौं। यस तरिकाले कार्य गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ ताकि हामी कहिले हराउने छैनौं। धेरै तहहरूको साथ काम गर्दै।
हामी एक बनाउँछौं गौसी ब्लर केन्द्र तहमा, धमिलो रकम केहि त्यस्तो हुन्छ जुन प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। यदि हामी एक तत्व र अर्को बिच एकदमै कडा भिन्नता चाहान्छौं, जस्तै पृष्ठभूमि धमिलो पार्दै, हामी अझ ठूलो धब्बा लागू गर्छौं।
धमिलोपना सिर्जना गरे पछि हामीले गर्नुपर्ने भनेको अर्को कुरा हो एक मास्क सिर्जना गर्नुहोस् माथिल्लो तहमा तहको (धमिलो लेयरको माथि) यस मास्कले के प्राप्त गर्छ माथिल्लो तह बन्न अनुमति दिईन्छ पारदर्शी यस माथि एक ब्रश पार गरेर। एक हो व्यापक प्रयोग प्रविधि धेरै कामहरूमा Photoshop।
ब्रशको साथ हामी जान्छौं ती क्षेत्रहरू चयन गर्दै जुन हामी ब्लर गर्न चाहन्छौं, हामी ब्रशको प्यारामिटरहरू खेल्छौं: कठोरता, अस्पष्टता, प्रवाह। यो प्रभाव प्राप्त भएको छ किनकि ब्रशको साथ क्षेत्रमा चित्र गर्दा हामी कार्यक्रमलाई भनिरहेका हुन्छौं कि हामी त्यो क्षेत्र पारदर्शी भएको चाहान्छौं, तल्लो लेयर देखिने गरी हामी त्यसको कदर गर्न सक्छौं धमिलो प्रभाव
हामी पनि लागू गर्न सक्छौंaस्तर समायोजन तह को उद्देश्य संग प्रकाश सहितको क्षेत्र हाइलाइट गर्नुहोस्। मानवीय आँखा जहिले पनि अधिक रोशनीको साथ क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छ, त्यस कारणका लागि ती क्षेत्रहरू महत्वपूर्ण छैन कि कालो हुँदै गएकोले हामीलाई सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ राम्रो छवि पठन.
को सहयोगमा Photoshop हामीले एउटा सिर्जना गर्न सिकेका छौं प्रभाव फोटोग्राफी मा व्यापक प्रयोग र असीमित प्रयोगको साथ सबै प्रकार को लागी ग्राफिक परियोजनाहरु। तह मास्क र समायोजन तहहरूको साथ काम आधारभूत, आवश्यक र प्रत्येक ग्राफिक कलाकारको लागि उपयोगी व्यावसायिक परिणामहरूको साथ हो। तपाईंको फोटो सुधार गर्नुहोस् र केही अधिक हावी गर्नुहोस् Photoshop यो ट्यूटोरियल को मद्दत को लागी धन्यवाद।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपमा स्पट फोकस केहि फोटोमा बाहिर देखिनको लागि
धेरै धेरै काम, सही?
फिल्टर मेनूमा तपाईंसँग ब्लर प्रभावहरूको ग्यालरी हुन्छ जुन एकदम पूरा समायोजनको श्रृंखलाको साथ त्यो राम्रो फिनिश दिन्छ।
यस तरीकाले सटीक टच अपको लागि ती कार्यहरूको लागि अझ सटीक तरीकामा प्रयोग गरिन्छ जसलाई अझ विस्तृत जानकारी चाहिन्छ। यो जस्तो छ जब र corre्ग सुधार एक सामान्य तरीकाले काम गरिन्छ वा यो छनौट सुधारको प्रयोग गरेर अधिक सटीक सुधारहरूको माध्यमबाट गरिन्छ। प्रत्येक प्रोजेक्टको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर तपाइँले जान्नुपर्दछ।
पैट्रियोन-क्राउडफन्डि,, जीविका कमाउने तरिका